Meksika: Mamantatra ny araben’i Meksika amin’ny alàlan’ny Google Street View · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Aogositra 2018 4:06 GMT
Ny 9 Novambra 2009, nandany ny tolakandrony tamin'ny fijerena sary ny Meksikana, natomboka ho an'ny tanandehiben'i Mexico (renivohitra),Guadalajara, Monterrey ary ny tanàndehibe miisa dimy hafa Meksikana tamin'ny Google Street View, tolotra iray ao amin'ny Google izay maka sary ny làlambe any amin'ny tanàndehibe lehibe indrindra manerantany hatreny amin'ny arabe ny olona. Mandritra izany fotoana izany, nohavaozina ny fampahafantarana momba ny tanàndehibe sasany tamin'ireo ary ahitana torohay vaovao, toy ny lalana halehan'ny fitateram-bahoaka, ny toerana misy ny toeram-pitsaboana, ny sinema ary ny mozea.
Nankasitraka ny tolotra ny ankamaroan'ny Meksikana, na dia naneho ny ahiahiny momba ny fiainany manokana aza izy ireo. Nanoratra i hekma tao amin'ny Twitter hoe:
Mbola tao amin'ny Twitter ihany, mihevitra i avomx fa mamoaka hafatra ara-tsosialy tsy nahy ny sary avy amin'ny Street View:
mexico_df ihany koa dia nahita ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiainan'ny Meksikana:
Andro vitsivitsy taty aorian'ny fanombohany, dia efa namolavola sahady ny tetikasa ilainy manokana ireo mpisera, miaraka amin'ny iray amin'ireo safidy malaza indrindra ao amin'ny Google Street View toy ny fitsangatsanganana virtoaly. Namoaka lahatsoratra momba ny tantaran'ny tanàndehiben'i Monterrey ilay bilaogera fantatra amin'ny anarana hoe Juan Crouset ary nampiasa ny Street View izy mba hanoroany lalana ny mpamaky azy momba ireo tranobe manan-tantara. Izany dia mifanohitra tanteraka amin'ny lahatsorany mahazatra, izay matetika feno fanadihadiana ara-tantara sy sary. Indro misy santionany tamin'ny asany:
Maro ny fampahalalam-baovao efa niresaka momba ity tolotra ity, anisan'izany ity lahatsoratra ity izay ahitana ny sary rehetra natokana ho an'ny faharavàn'ny tanàndehiben'i Mexico.